Football Khabar » गोमेज पेनाल्टीमा चुके : बार्सिलोनामाथि भ्यालेन्सिया हाबी !
गोमेज पेनाल्टीमा चुके : बार्सिलोनामाथि भ्यालेन्सिया हाबी !
स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा अहिले लिग लिडर बार्सिलोना र सातौं स्थानको भ्यालेन्सियाको खेल जारी छ । भ्यालेन्सियाको घरेलु मैदानमा जारी खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको छ । घरेलु टोली भ्यालेन्सियाका खेलाडी म्याक्सी गोमेज पेनाल्टीमा चुक्दा उसले पहिलो हाफमा अग्रता लिन पाएन ।
बार्सिलोनाका डिफेन्डर जेरार्ड पिकेले बक्समा भ्यालेन्सियाका खेलाडीमाथि फउल गरेपछि भ्यालेन्सियाले पेनाल्टी पाएको थियो । तर, गोमेजको पेनाल्टी बार्सिलोनाका गोलकिपर मार्क आन्द्रे टर स्टेगेनले शानदार बचाएपछि घरेलु टोलीलाई झट्का लागेको थियो ।
पेनाल्टी खेर फालेपछि पनि भ्यालेन्सियाले पाहुना टोली बार्सिलोनामाथि लगातार दबाब कायम राख्यो । बल बढी बार्सिलोनाको पक्षमा रहे पनि पोस्ट आक्रमणमा भ्यालेन्सियाले बढी अवसर बनाइरहेको छ । पहिलो हाफमा भ्यालेन्सियाका कूल पाँच प्रहार गोलकिपरले बचाउ भने एक प्रहार अफ् टार्गेट रह्यो ।
यता, बार्सिलोनाले पहिलो हाफमा फितलो प्रदर्शन गर्यो । उसले भ्यालेन्सियाको पोस्टमा गतिला आक्रमण बुन्नै सकेन भने मेस्सीका दुई फ्रि किक पनि असफल भए । एक पोस्टमाथिबाट बाहिरियो भने एक गोलकिपरले बचाए ।